Shillin Soomaaliga iyo sawirrada toddobaadka iyo Afrika - BBC News Somali
Shillin Soomaaliga iyo sawirrada toddobaadka iyo Afrika
Kuwan waxaa laga soo xushay sawirradii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkii hore lagu qaaday qaaradda Afrika.
Waxaa la qaaday intii u dhaxeysay 31-kii bishii January ilaa 6-dii bishan February.
Image caption Nin sarrifle ah ayaa Arbacadii lacag shilin Soomaali ah oo qiimaheedu uu aad u hooseeyo ku tirinayay suuq sarrifka lacagaha qalaad ah oo dusha ka bannaan, kaasoo ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Image caption Nin u dhashay Nigeria oo lagu magacaabo Oyindamola Kolawole, oo 26 jir ah, ayaa Sabtidii bandhig ku sameynayay barnaamij ka socday magaalada Lagos...
Image caption Labadan dumarka ah waxay sidoo kale muujinayaan sida ay isu laallaabi karaan, waxayna ka qeyb galeen isla bandhigga ka dhacay magaalada Lagos, Nigeria.
Image caption Ifeoma Amazobi, oo 22, waxay ka mid ahayd qabanqaabiyeyaashii ugu muhiimsanaa badnhiggaas, oo looga dan lahaa muujinta farshaxanka.
Image caption Maalintii Talaadada ahayd, caasimadda waddanka Malawi ee Lilongwe, qof taageerayay mucaaradka ayaa dabaaldag nooc kale ah sameeyay ka dib markii ay maxkamad waxba kama jiraan kasoo qaadday guushii doorashada ee madaxweyne Peter Mutharika...
Image caption Haween ayaa ciyaarayay maalintii xigtay, maadaama ay dabaaldagyada sii socdeen ka dib markii uu xukunk aweyn kasoo baxay maxkamadda.
Image caption Maalintii Jimcada, wiil u dhashay Libya ayaa mooto kor u qaaday, isagoo ku sugan magaalada Tripoli...
Image caption Carruurtan waxaa Talaadadii sawir laga qaaday iyagoo kubadda cagta ku ciyaaraya garoon bacaad ah oo ku yaalla magaalada Tripoli.
Image caption Nin dalxiise ah ayaa ku ciyaarayay dusha sare ee badda Cas, magaalada Dahab ee dalka Masar, maalintii Sabtida.
Image caption Caasimadda Zimbabwe ee Harare, hooyo iyo wiilkeeda ayaa Talaadadii la sawiray iyagoo kasoo laabtay isbitaalka.
Image caption Caasimadda Koonfur Afrika ee Pretoria, ciidamada ilaalada qaranka ayaa isu yimid goob ay ku sugneyd Ra'iisul Wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, oo dalkaas ku tagtay booqasho ay ujeeddadeeda tahay xiriirka ganacsi ee u dhaxeeya labada dal.
Image caption Sawirka ugu dambeeyana waa qof akhrisanaya wargeys kasoo baxa Kenya oo qoray faallo dib loogu eegayo taariikhdii maamul ee madaxweynihii hore ee Kenya Daniel arap Moi, oo maalintii Talaadada geeriyooday isagoo 95 jir ah.
Sawirradan waxaa laga soo kala qaatay AFP, EPA, PA iyo Reuters